Wararka - PCB Connect BV Hires Bill van de Griendt oo ah Maareeyaha Xisaabta Furaha
Iyada oo leh taariikh ballaaran oo ku saabsan warshadaha PCB, Bill van de Griendt PCB Connect BV oo ah Maamulaha Xisaabta Furaha ee suuqa Dutch.
Iyada oo leh taariikh adag iyo aqoon badan, khibradiisa balaaran ee 10 sano ee PCB warshadaha iyo 25 dhanka elektaroniga ah, shirkada ayaa sheegtay in Bill uu xoojin doono booskiisa uuna keeni doono PCB Connect aragti istiraatiiji ah ee suuqa. Khibradiisa qaaliga ah ayaa isaga ka dhigaysa mid ku habboon booskan.
"Si diiran ayaa la ii soo dhoweeyay waana jawi la yaab leh oo ay la kulmaan dad khibrad leh," ayuu yidhi Bill. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta arko fursadaha ka jira suuqa. Waxay ii tahay sharaf inaan ka shaqeeyo shirkad sida PCB Connect oo kale ah, waana inaan dhahaa waxaan ka mid ahaa dhanka tartamada waxaanan ka maqli jiray macaamiisha waxyaabo wanaagsan. ”
Xitaa haddii mustaqbalka ay adag tahay in la sii saadaaliyo aafada jirta awgeed, Bill wuxuu rumeysan yahay “waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan oo ku lug leh codsiyada caafimaadka. Isku xidhka PCB ayaa door muhiim ah ka ciyaara inta lagu jiro xiisaddan. Waxaan hubaa in marka la isku daro tayadeena iyo tasiilaadka wanaagsan aan nahay ciyaaryahan wanaagsan. ”
John Kuitert, oo ah Agaasimaha Maamulka PCB Connect BV, ayaa yidhi "Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan Bill ku soo dhoweeyo kooxda. Wuxuu keenaa khibrad badan, shabakad qiimo leh iyo aqoon badeecad / suuq oo faahfaahsan, laakiin sidoo kale tamar badan iyo xamaasad - aad buu caan ugu yahay ganacsiga. Si wadajir ah Iris iyo Sjoerd, oo nagu soo biiray bishii hore, Bill wuxuu xoojin doonaa kooxdeena Benelux. Waxaan ku kalsoonahay in tani ay ka dhalan doonto qiimo macmiil.
PCB Connect BV waxaa la aasaasay 2010 waxaana dhowaan loo dabaaldegay sanadguuradii 10-sano ee keenista PCB ee suuqa Dutch.